သပ်က်လီးဒ် - ဝီကီပီးဒီးယား
သပ်က်လီးဒ် (အင်္ဂလိပ်: Taqlid သို့မဟုတ် taqleed; အာရပ် تَقْليد taqlīd) ဆိုသည်မှာ နောက်လိုက်ခြင်း နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ်၏ ရှရီအသ်တရားတော်တွင် မဲရ်ဂျာအေသပ်က်လီးဒ် မှထုတ်ပြန်သော သာသနာ့ဆိုင်ရာပညတ်ချက်များအား လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းကို ခေါ်သည်။ သပ်က်လီးဒ် နှင့်ပတ်သက်၍ အိုဆူလေဒီးန်တွင် ဂျာယိဇ်(ခွင့်ပြုခြင်း) မဟုတ်ပါ။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိရှိအောင် လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည့် သာသနာ့လုပ်ဆောင်ချက် (ဖှရူအေဒီးန်) အပိုင်းတွင် အထူးပြု သင်ကြားလေ့လာဆည်းပူးထားသော ပညာရှင်များထံမှ သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရပေမည်။ ထိုပညာရှင်များကို မွတ်ဂျ်သဟိဒ်ဒေ ဂျာမေအွရှ်ရှရာယိသ် သို့မဟုတ် မဲရ်ဂျာအေသပ်က်လီးဒ် ဟုခေါ်သည်။ သို့သော်သပ်က်လီးဒ် နှင့်ပတ်သက်၍ အမြင် ကွာဟမှုများလည်းရှိသည်။
၁ သပ်က်လီးဒ် ၏ အဓိပ္ပာယ်~
၂ သပ်က်လီးဒ် ၏စစ်မှန်သောသက်သေ
၃ ရှီအာမဇ်ဟဘ် ၏ သပ်က်လီးဒ်
၃.၁ သပ်က်လီးဒ် သည် ဝါဂျိဘ် ဖြစ်ကြောင်း ရှီအာတို့၏အထောက်အထား
၃.၁.၁ သပ်က်လီးဒ် ဝါဂျိဘ်ဖြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားလေးခု
၃.၁.၁.၁ အက်လ်-အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထား
၃.၁.၁.၂ ဝဟီ ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထား
၃.၁.၁.၃ ဟဒီးစ် ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထား
၃.၁.၁.၄ အိဂျ်မာ့အ် ဆိုင်ရာအထောက်အထား
၃.၂ သပ်က်လီးဒ် ၏သော့ချက်များ
၄ အာယသွလ္လာရူဟွလ္လာ ခိုမိုင်နီ ၏ ရေစာလာတွင်ဖော်ပြထားသော သပ်က်လီးဒ် ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ
၅ စွန်နီမဇ်ဟဘ်၏ သပ်က်လီးဒ်
၅.၁ သပ်က်လီးဒ် ဂျာယိဇ် (သို့) ဟရာမ် ဖြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အဲဟ်လေစွန်နသ် တို့၏အမြင်
သပ်က်လီးဒ် ၏ အဓိပ္ပာယ်~[ပြင်ဆင်ရန်]
သပ်က်လီးဒ်သည် အရဗီဝေါဟာရ မဆ်ဒဲရ် ဘာဘေသဖှ်အီးလ် taqlīd ဆိုသည့်ဝေါဟာရမှဖြစ်သည်။ အဘိဓာန်တွင် အရာတစ်ခုသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ် လိုအပ်ခြင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ် တာဝန်ပေးခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဖှစ်ကာ အသုံးအနှုန်းတွင် အမလ်-လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်မှုများအတွက် မွတ်ဂျ်သဟိဒ်၏ မိန့်ရပ်များကို လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ ၎င်းဝေါဟာရသည် ဟဂျ် နှင့်ပတ်သက်သည့် ဖှစ်ကာ ပိုင်းတွင် ကွရ်ဘာနီလုပ်မည်ကို သိသာစေရန် သားကောင်၏ လည်ပင်း၌ အမှတ်အသားချိတ်ဆွဲခြင်းကိုလည်း ခေါ်သည်။ သပ်က်လီးဒ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၂ မျိုးနှစ်စား ဖှစ်ကာ နှင့် အိုဆူလ် တွင်ဖော်ပြသည်။ ဖှစ်ကာအပိုင်းတွင် ဟွတ်က်မေရှရ်အီး ကို အမလ် လုပ်ရန်အတွက် တတ်သိအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းကို မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏ ဖှသဝါ မှရယူခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်း နှင့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ဖှစ်ကာ ပညာရှင်အားလုံးနီးပါး သပ်က်လီးဒ် ကို မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏ ဖှသဝါ အတိုင်းအမလ် လုပ်ခြင်းဟုသာဖွင့်ဆိုထားကြသည်။
သပ်က်လီးဒ်သည် ဖှစ်ကာဟေအစ္စလာမ်တွင် အဲဟ်ကာမေဇရူရီး-အရေးအကြီးဆုံးမိန့်ရပ်- နှင့်ယကီးန် ပိုင်းဆိုင်ရာတို့၌ ဂျာယိဇ် မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သပ်က်လီးဒ်သည်ပညာ (မိန့်ရပ်) နှင့်ပတ်သက်၍ မိမိအတွက် မသိရှိနိုင်သည့် အနေအထားအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ သပ်က်လီးဒ်လုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်သည့် အခြားကိစ္စရပ်တစ်ခုမှာ အကာယိဒ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပြီး ပမာအားဖြင့် (အိုဆူလေဒီးန်) ၊ သပ်က်လီးဒ်သည် ယကီးန်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့်အရာ မဟုတ်ပါ။ သို့သော် မဇ်ဟဘ်၏ ဖှရ်အီး-အကိုင်းအခက်- ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျာဟိလ် တို့သည် အာလင်မ် များထံမှ လေ့လာဆည်းပူးခြင်းအားဖြင့် ယကီးန် ယုံကြည်ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကို ရယူနိုင်သည်။ ဥပမာ- အစ္စလာမ့် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ထံ လျှောက်ထားမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) ပြီးနောက် အေမာမသ် နှင့် ခေလာဖှသ်ကို ဆက်ခံမည့်သူများအား သိရှိနိုင်ခြင်း။ သို့သော်လည်းကောင်းကို သပ်က်လီးဒ် ဟု သက်သေပြုသတ်မှတ်၍ မရပါ။ အဲဟ်လေစွန်နသ် တွင်လည်း အကီဒါ ပိုင်း၌ သပ်က်လီးဒ် ကို ဂျာယိဇ်ဟု သတ်မှတ်မထားပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကီဒါ အပိုင်းတွင် လေ့လာတွေးခေါ်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့်သာ အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် စူရာ-ဇွခ်ရွဖှ် အာယသ် ၂၂ တွင် အထောက်အထားမဲ့လက်ခံခြင်းကို ရှေးယခင်(ဂျာဟိလ်) တို့၏လုပ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ မြတ်တမန် (ဆွ) သည်လည်း အာယသ်တော်များအပေါ် မအ်ရေဖှပ်သေအေလာဟီ-အရှင်မြတ်အားသိရှိခြင်း- နှင့်ပတ်သက်၍ စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြရန် မိန့်တော်မူထား၏။ မဇ်ဟဘ် ၏အပေါ်ယံ(ဖှရ်အီး)ကိစ္စရပ်များတွင်သာ သပ်က်လီးဒ် ကို ဂျာယိဇ်-ခွင့်ပြု- ထားပေသည်။.
အေမာမီယာဖှေကာ တွင် နောက်ထပ် သပ်က်လီးဒ် မလုပ်ရန်တားမြစ်ထားသည့်အရာများမှာ---မစာအိလ်လေအိုဆူလေဖှစ်က်- အိဂျ်သေဟာဒ် အတွက်အခြေခံလိုအပ်သည့်အရာများ ဥပမာ - အိလ်မေ ဆဲရ်ဖှ်၊ နဲဟ်ဝ် ၊ ထိုပညာရပ်တို့သည် အဲဟ်ကာမ် ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတို့ကို တတ်သိနားလည်ရန် သဒ္ဒါ ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေ ခံပညာရပ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် (သပ်က်လီးဒ်လုပ်ရန်လိုသည့်အရာများမှာ) ဥပမာ-နမားဇ် ရိုဇာ တို့ ဖြစ်သည်။ အရေးမကြီးလှသော အဲဟ်ကာမေရှရ်အီး အပိုင်းကဏ္ဍဖြစ်သည့် မွတ်စ်သဟဘ် နှင့် မကရူ ကိစ္စရပ်တို့၌ သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရန်မလိုအပ်ဘဲ စဝါးဘ်ရရှိ ရန်မျော်ကိုး၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဖှစ်ကာ ၏ပထမအရင်းအမြစ်သုံးခုတွင်လည်း ပညာရှင်တို့၏ စီရသ်-ဓလေ့ထုံးတမ်း-အထောက်အထားတို့ကို သပ်က်လီးဒ်လုပ်ခြင်းဂျာယိဇ် ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ့်မဇ်ဟဘ် များအကြား မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ကိုယ်တိုင်အတွက် သပ်က်လီးဒ် လုပ်ခြင်းသည် ဟရာမ် ဖြစ်သည်။ သို့သော် မွတ်ဂျ်သဟိဒ် မဟုတ်သူများသည် သပ်က်လီးဒ် လုပ်ကိုလုပ်ရမည်။
ရှီအာမဇ်ဟဘ် ၏ သပ်က်လီးဒ်[ပြင်ဆင်ရန်]
ရှီအာမဇ်ဟဘ် ၌ သပ်က်လီးဒ် သည်အေမာမ်(အစ) များခေတ်ကတည်းက အစပြုခဲ့သည်။ လူသားတို့အားမိမိတို့၏ နောက်လိုက်များ၊ ဟဒီးစ်ရေးသားပြုစုသူများ (သို့) မိမိတို့၏ အနီးကပ်နောက်လိုက် (အဆ်ဟားဘ်)များထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစေခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အဆ်ဟားဘ် တို့သည် မပ္စဂျစ်ဒ် များ အများဆိုင်နေရာများ၌ လူတို့အားစုဝေး၍ ဖှသဝါများကို ပြောကြားတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အေမာမ်(အစ) များခေတ်တွင် ၎င်းတို့အား သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ မြို့ရွာတို့၏ဝေးကွာမှု၊ အေမာမ်(အစ) အား တွေ့ဆုံရန်အတွက် လူသားတို့ခ ရီးနှင်ရမည့်အခက်အခဲများ၊ သကီယာ လုပ်ရမည့်အနေအထားများ၊ တစ်ကိုယ်ရေအခက်အခဲများ၊ အေမာမ်(အစ) တို့လူသားများနှင့် ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်တွေ့ဆုံရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂိုင်ဘသ်သေစွတ်ဂရာ ကာလတွင် သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရန်မှာ ပို၍လိုအပ်လာလေသည်။ ရှီအာတို့၏ နောက်ဆုံး အေမာမ်ဖြစ်သော( ၁၂ ပါးမြောက်အေမာမ် အ-စ ) သည် လည်း မပ္စအလာ အသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီသော မဲရ်ဂျာ့အ် တို့ထံ သပ်က်လီးဒ်လုပ်ရမည့်အကြောင်းမိန့်မှာခဲ့သည်။
ဂိုင်ဘသ်သေကွဘ်ရာ ကာလတွင်လည်း သပ်က်လီးဒ် နှင့်ပတ်သက်သည့် မပ်္စအလာသည် ရှီအာများအကြားရှိနေမြဲဖြစ်ပြီး ခေတ်အဆက်ဆက်ပညာရှင်များ ရာဝီ များအကြား မည်မျှပင် သပ်က်လီးဒ် နှင့်ပတ်သက်သည့် သတ်မှတ်ချက်များ မိန့်ရပ်များအပေါ် မတူကွဲပြားခြင်းများ ရှိနေသည်ဖြစ်စေ ၎င်း၏အရေးပါမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒွိဟသံသယဖြစ်ခြင်းများ အလွန်နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
လေ့လာစမ်းစစ်မှုများအရ အိဂျ်သေဟာဒ် ၊ သပ်က်လီးဒ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အိလ်မေအိုဆူလေဖှစ်က် ကိုသာ ပြန်လည်ဦးတည်ရပေမည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး အေမာမ်မီယာအိုဆူလ် စာအုပ်များ၌ အဇ်ဇရီအာအေလာအို ဆူလေရှရီအာ (ရေးသားသူ-စိုင်ယိဒ်မွရ်သသွါအိလ်မွလ်ဟိုဒါ- ၄၃၆ ကွယ်လွန်) စာအုပ်ကို ရေးသားချိန်မှအစ ယခုချိန်ထိ လေ့လာသုံးသပ်အသုံးပြုလျက် ရှိသည်။ ဖှစ်က်ဟေအစ်သစ်သ်ဒလာလီ စာအုပ်များနှင့်လည်း သပ်က်လီးဒ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖှကီးဟေဂျာမေအွရှ်ရှရာယစ်သ် ၏ လေ့လာသုံးသပ်ချက်များဖြင့် ထုတ်ဖော်တင်ပြလျက်ရှိသည်။ ၁၀ ရာစုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အခန်းကဏ္ဍများကို သီးသန့် အလ်အိဂျ်သေဟာဒ် ဝသ်သပ်က်လီးဒ် အမည်ခေါင်းစဉ် ၊ အခြားခေါင်းစဉ်များနှင့်လည်း ရေးသားတင်ပြမှုများ ရှိလာခဲ့သည်။ ရှိခ်အန်ဆွာရီ နောက်ပိုင်းတွင် လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ရေစာလာ များကိုစုစည်းရေးသားတင်ပြမှုများအစပြုလာခဲ့သည်။ အလ်အွရ်ဝသွလ် ဝတ်စ်ကာ (ရေးသားသူ-မိုဟမ္မဒ်ကာဇင်္မသဘာသဘာယီး-၁၃၃၇ ကွယ်လွန်) စာအုပ်၏ အစပိုင်းတွင်လည်း အိဂျ်သေဟာဒ် နှင့် သပ်က်လီးဒ် အကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြထားသည်။
သပ်က်လီးဒ် သည် ဝါဂျိဘ် ဖြစ်ကြောင်း ရှီအာတို့၏အထောက်အထား[ပြင်ဆင်ရန်]
ရှီအာဖှကီးဟ်များအကြား ကျော်ကြားသည့် မိန့်ဆိုချက်မှာ မိုကလ်လိဖှ် များအတွက် အိဂျ်သေဟာဒ်၊ အေ့ဟ်သေယာဒ် နှင့်သပ်က်လီးဒ် ဆိုသည့် အနေအထားသုံးမျိုးအနက် တစ်ခုခုတွင် ရှိရမည်မှာ ဝါဂျိဘ် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဝါဂျိဘ် အဖြစ်သတ်မှတ်ပုံတွင် အမြင်ကွာဟမှုရှိသည်။ အချို့က အဲဟ်ကာမ်မေရှရ်အီး ကိုရယူရာတွင် သို့မဟုတ် သပ်က်လီးဒ် သည် အဲဟ်ကာမ်မေရှရ်အီး ကို လက်တွေ့အမလ်လုပ်ရာ၌ မိုကဒ်ဒေမာ-အခြေခံအစပျိုး- ဖြစ်သည့်အတွက် (ဝါဂျိဘ်ဘေမိုကဒ်ဒေမီး)အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ အချို့က ၎င်းဝါဂျိဘ်ကို အပ်က်လီ-အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ-အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိုကလ်လိဖှ်သည် ဟရာမ်ကိုစွန့်လွှတ်ရာနှင့် ဝါဂျိဘ် ကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် နောက်ဆက်တွဲ စဝါးဘ် ၊ အဇါးဘ် များရှိသည့်အလျောက် ခိုင်လုံသည့်အထောက်အထားများ လိုအပ်သည်။ ထို ဟွတ်ဂျသ်-ခိုင်လုံသည့် အထောက်အထားပေးသည့် မှတ်ကျောက်- ကိုဖော်ပြခဲ့သည့် (အိဂျ်သေဟာဒ်၊အေ့ဟ်သေယာဒ်၊သပ်က်လီးဒ်) ဆိုသည့် နည်းလမ်းသုံးသွယ်မှ ရယူရမည် ဖြစ်၏။ ဦးစွာ မိုကလ်လိဖှ် သည် သပ်က်လီးဒ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝါဂျိဘ်ဘေသခ်ယီရီး ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အဲဟ်ကာမ် ကို မိမိကိုယ်တိုင်အိဂျ်သေဟာဒ် နည်းလမ်းဖြင့် ရယူနိုင်သော် ထိုနည်းလမ်းမှရယူရမည်။ အကယ်၍ တတ်နိုင်စွမ်းမရှိသော် သပ်က်လီးဒ် လုပ်သည့် လမ်းမှရယူရမည်။ ထိုအခါ သပ်က်လီးဒ် သည် ဝါဂျိဘ်ဘေသာအ်ယီနီး ဖြစ်သွားပေမည်။ ဖှကီးဟ် များ၏ရှင်းလင်းမိန့်ဆိုချက်အရ မည်သည့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမှမရှိဘဲ (ချက်ချင်းဆိုသလို) သပ်က်လီးဒ် မလုပ်နိုင်ပါ။ အသိဉာဏ်က ညွှန်ကြားပြသသည့် အနေအထားအပေါ် သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရပေမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဒုန်ရေဘာသိလ်-မန်သစ်က်ပညာရပ်အသုံးအနှုန်း- ဖြစ်ပေါ်လာမည်။ မည်မျှပင်အဲဟ်ကာမ်၏ အသေးစိတ်ကဏ္ဍများ၌ သပ်က်လီးဒ် လုပ်နိုင်ခြေ အခွင့်အလမ်းရှိနေသည်ဖြစ်ပါစေ။ စိုင်ယိဒ်မိုဟမ္မဒ်ဂျဝါးဒ် သည် သူ၏စာအုပ်တွင် ဤသို့ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ "မိုကလ်လိဒ်-သပ်က်လီးဒ်လုပ်သူ- သည်လည်း အဲဟ်ကာမေအေလာဟီ ကိုသိရှိရန်အတွက် (အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ) ပညာရှိရမည်။ ထိုသို့ဆိုခြင်းအားဖြင့် မွတ်ဂျ်သဟိဒ်ကို လိုအပ်ခြင်းမှလည်း ကင်းဝေးသွားမည် မဟုတ်ပေ။ ဖှကီးဟ် များက အလ္လာဟ်အရှင်၏ကျမ်းမြတ် နှင့် စွန်နသ် တော်များမှ အထောက်အထားခိုင်လုံစွာနှင့် ရှင်းလင်းတင်ပြထားသော အဲဟ်ကာမေရှရ်အီး ကို အသိဉာဏ်၏စေညွှန်းချက်နှင့် အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရပေမည်။ ထို့နောက် မိုကလ်လိဒ် သည် မပ်္စအလာ အချို့ကိုမွတ်ဂျ်သဟိဒ် အချို့ထံမှ သပ်က်လီးဒ် လုပ်နိုင်ပြီး ရှိရှိသမျှ မပ်္စအလာ အားလုံးကိုမွတ်ဂျ်သဟိဒ်တစ်ဦးတည်းထံမှ သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရမည်ဆိုသည့်အချက်မရှိပါ။ ဖော်ပြခဲ့သည့် မပ်္စအလာနှင့်ပတ်သက်၍ မွတ်ဂျ်သဟိဒ် သည်သက်ရှိထင်ရှားရှိရမည်ဆိုသည့်အချက်လည်းမလိုအပ်ပါ။"
သပ်က်လီးဒ် ဝါဂျိဘ်ဖြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားလေးခု[ပြင်ဆင်ရန်]
ဖှစ်ကာ ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်အထောက်အထားလေးခုမှ သပ်က်လီးဒ် ဝါဂျိဘ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းလေးခုမှာ- အက်လ်၊ ဝဟီ၊ ဟဒီးစ် နှင့် အိဂျ်မာ့အ် တို့ဖြစ်သည်။
သပ်က်လီးဒ် ဝါဂျိဘ် ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အထောက်အထားအမျိုးမျိုး ရှိသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် သပ်က်လီးဒ် သည် ဖှစ်သရီး-သဘာဝတရား- ဖြစ်သည်။ အထွေအထူးအထောက်အထားများ မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဂျာဟိလ်-ပညာမရှိသူ-သည် မိမိမသိရှိခြင်းအရာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဖှစ်သရီးအရ အာလင်မ်-ပညာရှိ-ထံ ဆည်းကပ်မည် ဖြစ်သည်။ အခြား သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုမှာ အသိဉာဏ်ရှိသူတို့၏ ဓလေ့ကား အကြောင်းအရာတစ်ခု နှင့်ပတ်သက်ပြီး (ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည့်အခါမျိုး၌) သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တို့ကို အထူးပြုသင်ကြားထားသည့် Proficient တို့ထံဆက်သွယ်ကြမည်သာဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှာရေ့အ်-တရားတော်ကို သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းတော်မူသော အရှင်မြတ်- သည်တားမြစ်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ထောက်ခံအားပေးထားသည် ထိုသို့မဟုတ်ပါက အရှင်မြတ်သည် အဲဟ်ကာမ်-သာသနာဆိုင်ရာဓမ္မသတ်များ- ကိုသိရှိရန်နှင့် အမိန့်နာခံရန်အတွက် အခြားလမ်းတစ်ခုကို ညွှန်ကြားပြသတော်မူမည်ဖြစ်၏။
သပ်က်လီးဒ် နှင့်ပတ်သက်၍ အာယသ်အတော်များများက အထောက်အထားပေးနေသည် စူရာ အန်ဗိယာ အာယသ်တော် ၇ တွင် အာလင်မ် «اهل ذکر» များထံမှ အာလင်မ်မဟုတ်သူများက မေးမြန်းကြရန် လိုအပ်ကြောင်း မိန့်ကြားထားသည်။ သို့သော် အချို့က ၎င်းအာယသ်ကို သပ်က်လီးဒ် နှင့်မဆိုင် ယုံကြည်မှုပိုင်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်ဟု ဖွင့်ဆိုကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာ စူရာ သောင်ဗါ အာယသ် ၁၂၂ ၌ သာသနာ့ပညာဖှစ်ကာ သင်ကြားရန်အတွက် ခရီးထွက်ရန်ပင်ဝါဂျိဘ် ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ဆိုထားသည်။ ၎င်းကို ဖှစ်ကာပညာရှင်များကလည်း သပ်က်လီးဒ် အတွက် ဂျာယိဇ် ဖြစ်သော သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် လက်ခံထားကြသည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင် လက်ခံနိုင်စရာမရှိသော သပ်က်လီးဒ် နှင့် လက်ခံရမည့်သပ်က်လီးဒ် ဟူ၍ နှစ်မျိုးဖော်ပြထားသည်။
ကုရ်အာန်၏အာယသ် အတော်များများတွင် ပညာမဲ့စွာ အစွဲအလမ်းကြီးစွာဖြင့် မွတ်ရှ်ရစ်က် နှင့် မာန်မာနထောင်လွှားသူတို့အား သပ်က်လီးဒ် လုပ်ခြင်းအားရှုံ့ချထားသည်။ ထိုနည်းတူစွာသာသနာ၏ အိုဆူလ် များကို မျက်ကန်းသဖွယ် လက်ခံခြင်းကိုလည်း ပညာမဲ့လုပ်ရပ်အသိဉာဏ်နှင့် ဆန့်ကျင်သောလုပ်ရပ်အဖြစ် ရှုံ့ချထားသည်။ စူရာ သောင်ဗါအာယသ် ၃၁ တွင် ယဟူဒီ များ မိမိတို့၏ ရှေးယခင် သာသနာ့ခေါင်းဆောင်များအား မေးမြန်းစူးစမ်းခြင်းမရှိ မျက်စေ့မှိတ် သပ်က်လီးဒ် လုပ် နောက်လိုက်ခြင်းကိုရှုံ့ချထားသည်။
အိုဆူလေဒီးန် နှင့် အကာယိဒ် ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် သပ်က်လီးဒ်လုပ်ခြင်းကိုကန့်ကွက်ထားသည်။ သို့သော် အာယသ်တော်များ၌ ဖှရူအေဒီးန်၊ အဲဟ်ကာမ် ပိုင်းတွင် သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရန်ထောက်ခံမိန့်ကြားထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဖှစ်ကာနှင့် သဖှ်စီးရ် ပညာရှင်များက စူရာ သောင်ဘာ အာယသ် ၁၂၂ ကို ပညာရှင်မဟုတ်သူများ အဲဟ်ကာမေဒီးန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သပ်က်လီးဒ်လုပ်ရမည့်အကြောင်း ဖွင့်ဆိုထားကြသည်။ အစ္စလာမ့်ပညာရှင်အချို့ကလည်း ဖော်ပြပါ အာယသ် ကို သပ်က်လီးဒ်၏မပ်္စအလာ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဂျာယိဇ် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူထားကြပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြသည်မှာ အစ္စလာမ်၏ သာ့အ်လီးမားသ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်ကြားခြင်း ဖှရူအေဒီးန် နှင့်ပတ်သက်ပြီး အခြားသူများအား ဖြန့်ဝေရာတွင် လူသားတို့ကလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးကြခြင်း ထိုသို့နောက်လိုက်ကျင့်သုံးခြင်းသည် သပ်က်လီးဒ်ပင် ဖြစ်၏။ အချို့ပညာရှင်များကလည်း စူရာ နဲဟ်လ် အာယသ် ၄၃ နှင့် စူရာ အန်ဗီယာ အာယသ် ၇ ကို ပညာရှင်မဟုတ်သူများ ဖှရူအေဒီးန်မပ်္စအလာနှင့်ပတ်သက်ပြီး မွတ်ဂျ်သဟိဒ် များထံ သပ်က်လီးဒ်လုပ်ရာ၌ အရေးကြီးကြောင်း ဖွင့်ဆိုထားကြသည်။ အချို့ပညာရှင်များကလည်း ၎င်းအာယသ်ကို မွတ်ဂျ်သဟိဒ် မဟုတ်သူများက မွတ်ဂျ်သဟိဒ်ထံ သပ်က်လီးဒ်လုပ်ရန် ဂျာယိဇ် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြုဖွင့်ဆိုထားကြသည်။ အလာမာသဘာသဘာယီး ကလည်း အထက်ပါ အာယသ်သည် အသိဉာဏ်နှင့် ကိုက်ညီသောအခြေခံကျသည့် မိန့်ဆိုချက်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ကျူးပြသနေပြီး ဂျာဟိလ် များက အဲဟ်လေအိလ်မ် ထံဆည်းကပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြထားသည်။
သှဖှ်စီးရ် နှင့် ဖှစ်ကာ ပညာရှင်များ ၎င်းကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အာယသ်တော်များမှ ဆိုလိုရင်းကို ကောက်နုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရှေးယခင်လူကြီး(ဂျာဟိလ်)များအား သပ်က်လီးဒ် လုပ်ခြင်းကို လမ်းညွှန်ခြင်း မရှိသည့်အပြင် ရှုံ့ချထားပြီး ဆိုလိုရင်းမှာ ဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသော အာလင်မ် များအား သပ်က်လီးဒ် လုပ်ခြင်းအား လမ်းညွှန်မိန့်ကြားထားခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။
အေမာမီယာ ဖှစ်ကာ ပညာရှင်များ သပ်က်လီးဒ် ဂျာယိဇ် ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြုထားသည့်ဟဒီးစ်များမှာ
သပ်က်လီးဒ် (သို့) ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်တို့ကိုခြုံငုံတင်ပြထားသည့် ဟဒီးစ်များ
အေမာမ်(အစ) များက ရှီအာတို့အား ရာဝီများထံဆက်သွယ်မေးမြန်းကြရန်မိန့်မှာခဲ့သည့် ဟဒီစ်များ
အေမာမ် (အစ) တို့သည်မိမိတို့၏ အဆ်ဟာဘ် များကိုလူသားတို့အား ဖှသဝါ ပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ဖှသဝါ များကို ထောက်ခံပေးခဲ့သည့်ဟဒီးစ် များ
ပညာမဲ့စွာဖြင့် ဖှသဝါ ပေးခြင်း မဲ ၊ ကယားစ်တို့ဖြင့် ဖှသဝါပေးခြင်းများကိုတားမြစ်ထားပြီး ထိုသို့တားမြစ်လိုက်ခြင်းသည် ခိုင်လုံသည့် ရှရ်အီး အထောက်အထားအပေါ်မှသာ ဖှသဝါ ပေးခြင်းသည် ဂျာယိဇ် ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ဆိုထားသည့် ဟဒီးစ် များ
ရှရ်အီး နှင့်အညီဖှသဝါ ပေးခြင်းသာဂျာယိဇ် ဖြစ်ကြောင်းကို အေမာမ်(အစ) များက သပ်က်ရီးရ် အနေအထားဖြင့် ထောက်ခံမှုပေးခဲ့သည့် ဟဒီးစ်များ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
သပ်က်လီးဒ် ဂျာယိဇ် ဖြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ နောက်အထောက်အထားတစ်ခုမှာ မေးမြန်းခြင်းသည် ဂျာယိဇ် ဖြစ်ခြင်းကို ဖှစ်ကာ ပညာရှင်များအားလုံး မငြင်းဆန်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဟ်ကာမ် ကိုမေးမြန်းရာတွင်လည်း မိန့်ရပ်၏ အထောက်အထားကို မေးမြန်းခြင်း မလိုအပ်သည့် အမေးမျိုး ဖြစ်မည်။ (ထိုအနေအထားသည် ဖှစ်ကာပညာရှင်များအကြားတူညီချက်-အိဂျ်မာ့အ်- ဖြစ်သည်။) ဤကဲ့သို့ အိဂျ်မာ့အ် မျိုးမရှိဟု ပြောကောင်းပြောကြမည်။ သပ်က်လီးဒ် သည် လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်ကတည်းက ရှီအာ များအကြားစီးမျောနေခဲ့သည်။ ဥပမာ-ရှီအာ များ၏အာလင်မ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သော အိဗ်နေဇိုဟ်ရာဟ် သည်အာလင်မ် များအတွက် သပ်က်လီးဒ် ကိုဟရာမ်ဟုဆိုထားသည်၊ ( ဖှသဝါ ပေးနိုင်သူက ဖှသဝါ မေးခြင်းမပြုနိုင်ပါ) အေမာမီယာ တို့သည် အမလ်ဆိုသည်မှာ အိလ်မ် -ပညာ- ပေါ်တွင်သာ အခြေခံသည်ဆိုသည့် အချက်တွင် တူညီမှုရှိကြသည်။ အိဂျ်မာ့အ် ဆိုသည်ကား ဟွတ္ကမ် တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အထောက်အထားမတွေ့ရှိနိုင်သည့် အခါမျိုးတွင် ဖှကီးဟ် များ ထိုမိန့်ရပ်အပေါ် တူညီစွာထွက်ဆိုသည့် ဖှသဝါအပေါ်အမလ် လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာနှင့်အထောက်အထားခိုင်လုံသည့် ဟွတ္ကမ် မျိုးတွင်ထိုအနေအထားသည် ဂျာယိဇ် မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အမလ် သည် အိလ်မ် အပေါ်တွင်သာအခြေခံပြီး မရ်ဂျာ့အ် သည်လည်း ဂျာယိဇ်ဇွလ်ခသာ-အမှားမကင်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အာယသွလ္လာမွန်သဇရီ သည်လည်း မဘာနီယေဖှစ်က်ဟီးယေဟကူမသ်သေအ စ္စလာမီး ဆိုသည့်စာအုပ်တွင် သပ်က်လီးဒ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒလီးလေ နပ်က်လီ (ပြုစုရေးသားထားသောကုရ်အာန်၊ ရေဝါယသ်အပေါ်မှအထောက်အထားရယူခြင်း) ဒလီးလေ အပ်က်လီ(အသိဉာဏ်မှပေးသည့်အထောက်အထား)တို့ ဖြင့်ထောက်ပြထားသည်မှာ ကုရ်အာန်တွင် ပညာလေ့လာဆည်းပူးရန်နှင့် ပညာရှင်များကိုဆည်းကပ်ရန်ကိုသာ တိုက်တွန်းအားပေးထားခြင်း လူတို့သည်လည်း ဆိုင်ရာရူ့ထောင့်တိုင်းတွင် မိမိတို့အမလ် ကိုမိမိတို့ပြုလုပ်နေကြခြင်းသည် သပ်က်လီးဒ် ကို ဖော်ကျူးနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုနည်းတူစွာ ကုရ်အာန် အာယာသ် ကဲ့သို့ပညာကိုလေ့လာဆည်းပူးရန် တိုက်တွန်းထားသည့် ရေဝါယသ် များကိုလည်း သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရန်အတွက် ဂျာယိဇ် ဖြစ်ကြောင်းအထာက်အထား ပြုသည်ဆိုပါက အားနည်းချက်ရှိသော ရေဝါယသ် ဖြစ်သည်။ အပ်က်လီ ဆိုင်ရာတွင်လည်း ထိုသို့ဆို၏ အသိဉာဏ်ရှိသူတို့သည် ဘာသာရပ်အသီးသီး ရှု့ထောင့်အသီးသီးတွင် အထူးပြုလေ့လာဆည်းပူးထားကြသူများကို သပ်က်လီးဒ် မလုပ်ကြပေ။ ထို့အပြင်ခြုံငုံ၍ပညာဗဟုသုတရရန်အတွက် ထိုအထူးပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံ ဆည်းကပ်ကြမည်သာ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် အထူးပြုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ အမြင်သည် သူ့အတွက်လုံလောက်နိုင်သလို ကိစ္စရပ်တစ်ခုအတွက် အထူးပြုပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးထံလည်း ဆက်သွယ်လေ့လာကောင်း လေ့လာကြမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပညာနည်းပါးသူ၏ အမြင်အတိုင်း အမလ်လုပ်ကောင်းလုပ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ အမြင်အပေါ်တွင်သာ မှီတွယ်ပြီးကျန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အသိအမြင်များကို အသုံးချရန်မလိုဟု ဘယ်သောအခါမှ အသိဉာဏ်က ညွှန်ပြမည်မဟုတ်ပေ။ (ဖော်ပြခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများ၏ရလဒ်မှာ အကြောင်းကိစ္စရှု့ထောင့်တိုင်းအတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏အမြင် တစ်ခုတည်းနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပေ။ သို့ပါ၍ အိဂျ်မာ့အ်ဟုခေါ်သော ဖှကီးဟ်ပညာရှင်တို့၏ တူညီစွာပြောဆိုမိန့်ကြားမှုများ လိုအပ်နေပေဦးမည်။ အိလ်မေအေလာဟီ သာလျှင် ပြီးပြည့်စုံမှုရှိပြီး အရှင်နှင့် အရှင်ကရွေးချယ်စေလွှတ်သော ဟွတ်ဂျသ် များ၏ မိန့်ရပ်များသာလျှင် တစ်မျိုးတည်း တစ်ခုတည်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
အိုဒူးလ်- လက်ရှိ သပ်က်လီးဒ် လုပ်နေသည့် မဲရ်ဂျာ့အ် မှနောက် မဲရ်ဂျာ့အ် တစ်ဦးသို့ပြောင်းခြင်း၊ ထိုသို့ပြောင်းရာ၌ နောက် မဲရ်ဂျာ့အ် သည် ပညာအရာ၌သာလွန်မှုရှိပါမှ ဂျာယိဇ် ဖြစ်သည်။
သဗအီးဇ်- အဲဟ်ကာမ် ဓမ္မသတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခြားမဲရ်ဂျာ့အ် တစ်ဦးသို့ ပြောင်းလဲအမလ်လုပ် ရာတွင်(ဥပမာ-ခွမ် စ် ၊ အမွေခွဲဝေခြင်း) အများအမြင်တွင် မဲရ်ဂျာ့အ် တို့သည် ပညာအရာတွင်တူညီမှုရှိသော် ဂျာယိဇ် ဖြစ်သည်။
ရိုဂျူအ်- မဲရ်ဂျာ့အ် တစ်ဦး၏ ဖှသဝါ မှပညာအရာ၌ တူညီသောအခြား မဲရ်ဂျာ့အ် တစ်ဦး၏ ဖှသဝါသို့ပြောင်းလဲရာတွင် များသောအားဖြင့် အင်ဟာယီး-(ရှု့ထောင့်အမြင်များတူညီမှုရှိသော်) ဂျာယိဇ် ဖြစ်သည်။
ကွယ်လွန်သွားသော မဲရ်ဂျာ့အ် ကိုဆက်၍ သပ်က်လီးဒ် လုပ်ခြင်း- သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသောမဲရ်ဂျာ့အ် တစ်ဦး၏ခွင့် ပြုချက်ဖြင့် ဂျာယိဇ် ဖြစ်သည်။
အာယသွလ္လာရူဟွလ္လာ ခိုမိုင်နီ ၏ ရေစာလာတွင်ဖော်ပြထားသော သပ်က်လီးဒ် ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ[ပြင်ဆင်ရန်]
-အိုဆူလေဒီးန် နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာများကို မွတ်စလင်မ် တို့သည် ဒလီလ် သက်သေအထောက်အထားပေါ်မှယုံ ကြည်မှုရှိရမည်ဖြစ်ပြီး သာသနာ၏အဲဟ်ကာမ် ဓမ္မသတ်များကိုမိမိကိုယ်တိုင်မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ဖြစ်အောင်လုပ်၍ရယူရမ ည် (သို့) မွတ်ဂျ်ဟိဒ် တစ်ဦးဦးထံ သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရမည် (သို့) အေ့ဟ်သေယာသ် လုပ်ရမည် ဆိုလိုသည်မှာအချို့ မွတ်ဂျ်သဟိဒ် များက အမလ် တစ်ခုကို ဟရာမ် ဟုသတ်မှတ်ပြီးအချို့ မွတ်ဂျ်သဟိဒ် တစ်စုက ဟရာမ်မဟုတ်ဟုဆို သော်မိမိ ကထိုလုပ်ရပ်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ အမလ် တစ်ခုကိုအချို့က ဝါဂျိဘ် ဟုဆိုပြိးအချို့က မွတ်စ်သဟဘ် ဟုသတ်မှတ်ပါ က ထိုလုပ်ရပ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မွတ်ဂျ်သဟိဒ် လည်းဖြစ်နိုင်စွမ်း မရှိ အေ့ဟ်သေယာသ် လည်းမလုပ်နိုင်ပါက မွတ်ဂျ်သဟိဒ် တစ်ဦးထံ သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရမည်မှာ ဝါဂျိဘ် ဖြစ်သည်။ (မပ်္စအလာ-၁)
-သပ်က်လီးဒ် ဆိုသည်မှာ အဲဟ်ကာမေရှရ်အီး နှင့်ပတ်သက်ပြီး မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏မိန့်ရပ်များကို အမလ်လုပ်ခြင်းဖြစ် သည်။ သပ်က်လီးဒ်လုပ်မည့် မွတ်ဂျ်သဟိဒ်သည် အမျိုးသား၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၊ အသိဉာဏ်ရှိသူ၊ ၁၂ ပါးအေမာမ် ကိုလက်ခံယုံကြည်သည့်ရှီအာ၊ ဟလာလ်ဇာဒါ၊ သက်ရှိထင်ရှားရှိသူ၊ အာဒိလ်-တရားမျှတသူ- စသည့်အချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူဖြစ်ရမည်။ အေ့ဟ်သေယာသေဝါဂျိဘ် လောကီရမ္မက် ရှိသူမဖြစ်စေရ၊ အခြား မွတ်ဂျ်သဟိဒ် များထက်ပ ညာတွင်သာလွန်မှုရှိရမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ လက်ရှိခေတ်ကာလတွင် အရှင်မြတ်၏ပညတ်တော်များကိုတတ်သိနား လည်ရာ၌အခြားမွတ်ဂျ်သဟိဒ် များထက်သာလွန်ရမည်။ (မပ်္စအလာ ၂ )
-မွတ်ဂျ်သဟိဒ် အာအ်လမ်-အခြားသူများထက်ပညာတွင်တော်ကြောင်း- ဖြစ်ကြောင်းကိုနည်းလမ်းသုံးသွယ်ဖြင့်သိရှိ နိုင်သည်၊ ပထမ-မိမိကိုယ်တိုင် ယကီးန်-ယုံကြည်မှု-ရှိခြင်း ဒုတိယ-အာဒိလ်ဖြစ်သောအာလင်မ် နှစ်ဦးမှ အာအ်လမ် ဖြစ်ကြောင်း မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပေးခြင်း ထိုအနေအထားတွင်အခြား အာဒိလ် ဖြစ်သောအာလင်မ် နှစ်ဦးကဆန့်ကျင်ပြောဆိုခြင်းမရှိစေရ၊ တတိယ - ပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှ မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ဖြစ်ကြောင်း အာအ်လမ် ဖြစ် ကြောင်းထောက်ခံပြောဆိုပါကထိုပြောဆိုမှုများအပေါ်လက်ခံယုံကြည်နိုင်စရာလည်းရှိသော် အာအ်လမ် ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်နိုင်သည်။(မပ်္စအလာ ၃ )
-အကယ်၍ အာအ်လမ် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိနိုင်ရန်ခက်ခဲမှုရှိနေသော် အာအ်လမ် ဖြစ်သည်ဟုထင်ရသောမွတ်ဂျ်သဟိဒ် ကို သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရမည်မှာ အေ့ဟ်သေယာသေဝါဂျိဘ် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ထင်မြင်ချက်သည်အားနည်းနေသည် ဆိုပါမူ သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရမည်မှာ အေ့ဟ်သေယာသေဝါဂျိဘ် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍မိမိ၏အမြင်တွင် မွတ်ဂျ်သဟိဒ် အချို့သည် အာအ်လမ် ဖြစ်နေမည် သို့မဟုတ် တူညီမှုရှိနေမည်ဆိုလျှင် တစ်ဦးဦးကိုရွေးချယ်ပြီး သပ်က်လီးဒ် လုပ်ရ မည်။(မပ်္စအလာ ၄ )
-ဖှသဝါ များကိုလက်ဝယ်ရရှိရန်နည်းလမ်းလေးခုရှိသည် ၁-မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ကိုယ်တိုင်ထံမှကြားသိခြင်း ၂-အာဒိလ်နှစ် ဦးထံမှတဆင့် မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏ဖှသဝါကိုကြားသိရခြင်း ၃-အမှန်ပြောတတ်သူယုံကြည်စိတ်ချရသူထံမှကြားသိရခြင်း ၄-မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏ ရေစာလာ-အဲဟ်ကာမ်များကိုစုစည်းတင်ပြထားသောစာအုပ်- တွင်တွေ့ရှိခြင်း။(မပ်္စအလာ ၅ )-မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏ ဖှသဝါ ပြောင်း မပြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယကီးန် မရှိသော် ရေစာလာ တွင်ရေးသားထားသည့်အ တိုင်းသာ အမလ် လုပ်ရမည်။ ပြောင်းသွားပြီဟုထင်မြင်ချက်ရှိလျှင်လည်းလေ့လာစုံစမ်းစရာမလိုပါ။(မပ်္စအလာ ၆ )
-မွတ်ဂျ်သဟိဒ်ဒေအာအ်လမ် က မပ်္စအလာ တစ်ခုကိုဖှသဝါ ပေးထားမည် မိုကလ်လိဒ်-ထိုမွတ်ဂျ်သဟိဒ်အားသပ်က် လီးဒ် လုပ်သူ- သည်၎င်းမပ်္စအလာ နှင့်ပတ်သက်ပြီးအခြားမွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏ဖှသဝါအပေါ်အမလ် မလုပ်နိုင်ပါ၊အကယ် ၍မပ်္စအလာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖှသဝါ ပေးထားခြင်းမရှိဘဲ အေ့ဟ်သေယာသ် ဟုသာပြောထားမည်ဆိုလျှင် ဥပမာ- တတိယ နှင့်စတ္တုထ ရကအသ် တွင်သပ်္စဗီဟာသေအရ်ဘာအ် "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر" ကိုသုံးကြိမ် ဖတ်ရမည်မှာ အေ့ဟ်သေယာသ် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော် မိုကလ်လိဒ် သည်အေ့ဟ်သေယာသေဝါဂျိဘ် ဖြစ်သည့်ထိုမိန့် ရပ်ကို အမလ်လုပ်ရမည် သို့မဟုတ် မွတ်ဂျ်သဟိဒ်ဒေအာအ်လမ် ထက်နိမ့်ပြီးအခြားမွတ်ဂျ်သဟိဒ် များထက်သာ သော မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏ဖှသဝါ အတိုင်းလိုက်နာအမလ်လုပ်ရမည်မှာ အေ့ဟ်သေယာသေဝါဂျိဘ် ဖြစ်သည် ဥပမာ-ထို မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ကတစ်ကြိမ်ဖတ်လျှင်လုံလောက်သည်ဟုဆိုပါက ထိုမိန့်ရပ်ကိုလည်းအမလ်လုပ်နိုင်သည်။ (မပ်္စအလာ ၇ )
-အကယ်၍ မွတ်ဂျ်သဟိဒ်ဒေအာအ်လမ် သည် မပ်္စအလာ တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖှသဝါ ပေးပြီးနောက်မှ အေ့ဟ်သေ ယာသ် လုပ်ရန်လည်းပြောမည် ဥပမာ-နဂျစ်္စ ဖြစ်နေသောပန်းကန်ကို ကွရ်ရေတွင်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါက သွဟာရသ် ဖြစ် သွားမည်ဟုဆိုမည်ထို့နောက် အေ့ဟ်သေယာသ် အနေနှင့်သုံးကြိမ်ဆေးကြောရမည်ဟုဆိုပါက မိုကလ်လိဒ် သည် ၎င်းမပ်္စအလာ နှင့်ပတ်သက်ပြီးအခြား မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏မိန့်ရပ်ကိုအမလ် မလုပ်နိုင်ပါ၊ ထို့အပြင်၎င်းဖှသဝါ ကိုအမလ် လုပ်လျှင်လုပ်နိုင်ပြီး (သို့) အေ့ဟ်သေယာသ် ဟုဆိုသည့် (အေ့ဟ်သေယာသေမွတ်စ်သဟဘ်) သုံးကြိမ်ဆေးကြော ခြင်းကိုသာအမလ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ (မပ်္စအလာ ၈ )
-ယခုမှစတင် သပ်က်လီးဒ် လုပ်မည့်သူသည်ကွယ်လွန်သွားသော မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ကိုသပ်က်လီးဒ်မလုပ်နိုင်ပါသို့သော် မိမိ သပ်က်လီးဒ် လုပ်ပြီးချိန်မှကွယ်လွန်သွားသော် သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသော မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆက်၍ သပ်က်လီးဒ် လုပ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မွတ်ဂျ်သဟိဒ် တစ်ဦးထံမှအချို့သော မပ်္စအလာ များကို သပ် က်လီးဒ် လုပ်ခဲ့မည်ထို မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ကွယ်လွန်သွားပါက မပ်္စအလာ အားလုံးကိုဆက်ပြီး သပ်က်လီးဒ် လုပ်လိုသော် လုပ်နိုင်သည်။ (မပ်္စအလာ ၉ )
-အကယ်၍ မပ်္စအလာ တစ်ခုတွင်မွတ်ဂျ်သဟိဒ် တစ်ဦး၏ဖှသဝါ အတိုင်းအမလ် လုပ်ခဲ့မည် ၎င်းအာလင်မ် ကွယ်လွန် ပြီးနောက်၎င်းမပ်္စအလာကိုသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသော မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ထံပြောင်းပြီးအမလ်လုပ်ခဲ့သော်နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်၍ ၎င်းမပ်္စအလာကိုကွယ်လွန်သွားသော မွတ်ဂျ်သိဒ် ၏မိန့်ရပ်အတိုင်းအမလ်မလုပ်နိုင်ပါ၊သို့သော်သက်ရှိထင်ရှား မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ကဖှသဝါ မပေးဘဲ အေ့ဟ်သေယယာသ် ဟုသာပြောထားမည် မိုကလ်လိဒ် သည်လည်း အေ့ဟ်သေ ယာသ် ကိုအချိန်တစ်ခုထိ အမလ် လုပ်ပြီးမှ၎င်းမပ်္စအလာ ကိုပင်ကွယ်လွန်သွားသော မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏(မွတ်ဂျ်သဟိ ဒ်ဒေမိုင်ယိသ် ကဖှသဝါပေးထားခဲ့မည်) ဖှသဝါ အတိုင်းနောက်တစ်ကြိမ် အမလ်လုပ်နိုင်သည်၊ ဥပမာ - အကယ်၍ မွတ်ဂျ်သဟိဒ် တစ်ဦးကတတိယနှင့်စတ္တုထရကအသ် တွင်သပ်္စဗီဟာသေအရ်ဘာအ် တစ်ကြိမ်ဖတ်လျှင်လုံလောက် သည်ဟုပြောမည် မိုကလ်လိဒ် ကလည်းအချိန်တစ်ခုထိ၎င်းအပေါ် အမလ် လုပ်ခဲ့မည်ထို့နောက်၎င်း မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ကွယ်လွန်သွားမည်။ ထိုအခါသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသော မွတ်ဂျ်သဟိဒ် က အေ့ဟ်သေယာသေဝါဂျိဘ် သုံးကြိမ်ဖတ်ရ မည်ဟုပြောမည် မိုကလ်လိဒ် သည်လည်းထိုသုံးချိန်ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အမလ် လုပ်ပြီးမှတစ်ကြိမ်ဖတ် လျှင်လုံလောက်သည်ဟု ဖှသဝါပေးခဲ့သည့် မွတ်ဂျ်သဟိဒ်ဒေမိုင်ယိသ် ၏အမိန့်အတိုင်းနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်၍အမလ် လုပ်နိုင်သည်။ (မပ်္စအလာ ၁၀ )
-လူသားတို့သည် အမြဲဆိုသလို လိုအပ်ချက်ရှိသည့် မပ်္စအလာ များကိုရယူသင်ကြားရမည်မှာ ဝါဂျိဘ် ဖြစ်သည်။ (မပ်္စအလာ ၁၁ )
-အကယ်၍အကြောင်းကိစ္စပေါ်ပေါက်လာချိန်မိမိသည်၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မပ်္စအလာ ကိုမသိရှိပါကမွတ်ဂျ်သဟိဒ် ဒေအာအ်လမ် ၏ဖှသဝါကိုလက်ဝယ်ရရှိသည်အထိ စောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်၊ အကယ်၍ အေ့ဟ်သေယာသ်လုပ်နိုင်ပါက အေ့ဟ်သေယာသ် လုပ်ရမည်၊ အေ့သေယာသ် လည်းလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စသည်လည်းအရေး ကြီးနေပါက အမလ် ကိုလုပ်လိုက်နိုင်သည် ထို့နောက်မိမိလုပ်လိုက်သည့် အမလ်သည်မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏မိန့်ရပ်နှင့်လွဲ နေပါက နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရမည်။ (မပ်္စအလာ ၁၂ )
-အကယ်၍တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မွတ်ဂျ်သဟိဒ် ၏ဖှသဝါကိုအခြားတစ်ယောက်အားပြောပြမည်ထို့နောက်ဖှသဝါ သည်ပြောင်းသွားမည်ဆိုပါက ပြန်သတင်းပေးစရာတာဝန်မရှိပါ။ အကယ်၍မိမိပြောခဲ့သည့်ဖှသဝါမှားနေခဲ့သော်ဖြစ် နိုင်ခြေရှိပါက အမှန်အတိုင်းပြန်ပြင်ပြောရမည်။ (မပ်္စအလာ ၁၃ )
-အကယ်၍ မွတ်ကလ်လိဖှ် တစ်ဦးသည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ သပ်က်လီးဒ် မလုပ်ဘဲ အမလ် လုပ်ခဲ့သော် အမှန်တကယ်မိမိလုပ်ဆောင်ရမည်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမျိုးဖြစ်မည်၊သို့မဟုတ် သူသပ်က်လီးဒ် လုပ်ရမည့် မွတ်ဂျ်သ ဟိဒ် ၏ဖှသဝါနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခဲ့မည်ဆိုလျှင် သူ၏အမလ်သည် ဆဟီ-မှန်ကန်-ဖြစ်သည်။ (မပ်္စအလာ ၁၄ )
အဲဟ်လေစွန်နသ် တို့အကြား သပ်က်လီးဒ် သည်အနေအထားအမျိုးမျိုးနှင့်မတည်ငြိမ်မှုများရှိခဲ့သည်။ အချို့ရေးသားပြုစုသူများသည် အဲဟ်လေစွန်နသ်၏ ဖှစ်ကာ ကိုကာလလေးပိုင်း လေးမျိုးဖော်ပြထားကြသည်။
၁- အစပိုင်းကာလ: ထိုအပိုင်းတွင် ခလီဖှာ နှင့် ဆွဟာဘာ များခေတ်သို့ ပြန်သွားရပေမည်။ ထိုသူတို့သည် အဲဟ်ကာမ် ကိုသိလိုသောအခါ ဆွဟာဘာ များထံမှမေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်ကာလက အဲဟ်လေစွန်နသ်တို့အကြား မဇ်ဟဘ် များအသီးသီး ပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ထို့အပြင်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) ၏မိန့်ဆိုချက် ရေဝါယသ် များအပေါ် အငြင်းပွားစရာမရှိပါမူ အားလုံးတူညီစွာ အမလ် လုပ်ခဲ့ကြပြီး အမြင်ကွာဟမှုနှင့် အငြင်းပွားစရာများရှိခဲ့သော် မိမိတို့ကြိုက်ရာ ဆွဟာဘာ ထံမှမေးမြန်းအမလ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ သို့ပါ၍၎င်းတို့အကြားသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ် ၊ နည်းလမ်းများဟူ၍မရှိခဲ့ပါ။
၂- ဖှစ်ကာ ဆိုင်ရာမဇ်ဟဘ် များပေါ်ပေါက်လာသည့်ကာလ:  ဟဒီးစ် ရေးသားပြုစုသူ များပြားလာပြီး  ဒသအသီး သီးတွင်ပညာရှင်များ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ  လူတို့သည်လည်းပညာရှင်အသီးသီးထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြလေသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် တစ်မျိုးတစ်ဖုံသာသနာ့ မဲရ်ဂျာ့အ် များအနေနှင့် ရပ်တည်လာကြပြီး ဖှစ်ကာဆိုင်ရာမဇ်ဟဘ် များကို အခြေချခဲ့သည်။
၃-ဖှစ်ကာ ဆိုင်ရာမဇ်ဟဘ် လေးမျိုးကာလ: မဇ်ဟဘ်တို့၏ပဋိပက္ခသည်အရိပ်လိုတစ်လျှေက်လုံးရှိနေခဲ့ပြီး မဇ်ဟဘ် ဝင်တို့၏ အစွဲကြီးမှုများ၊ ရန်လိုမှုများသည်ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ မနာလိုမှုများ၊ မိမိကိုယ်မိမိအထင်ကြီးမှုများနှင့် အခြားသော ညံ့ဖျင်းသည့် စာရိတ္တများသည် ၎င်းတို့၏အတွေးအခေါ်များကိုပျံ့လွင့်သွားစေခဲ့သည်။ တစ်ဖက်မှလည်းမဇ်ဟဘ် များ၏ပဋိပက္ခသည်ပြင်းထန်လျက် ရှိနေပြီး  တစ်ဖက်မှကြည့်မည်ဆို လျှင်လည်းတရားစီရင်ထုံးများ၌ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတွေ ဖြစ်နေကြသည်။   မဇ်ဟဘ်တစ်ခုက အပ်က္ဒ  တစ်ခုကို ဘာသိလ် ဟုဆိုသော်နောက်မဇ်ဟဘ် တစ်ခုက ဆဟီ  ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပြန်သည်။   မဇ်ဟဘ်တစ်ခုတွင် လုပ်ရပ်တစ်ခုအားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားသော်လည်း နောက်  မဇ်ဟဘ် တစ်ခု၌ ပြစ်ဒဏ်မထိုက်ပေ။ ထိုကဲ့သို့ အခြေအနေများနှင့် မဇ်ဟဘ် တို့၏ တက်ညီလက်ညီ လှော်ခတ်နေမှုများကြောင့် အိဂျ်သေဟာဒ် နှင့်ပတ်သက်သောတံခါးများပိတ်ဆို့ကာ နောက်တိုး မဇ်ဟဘ် များလည်းရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ၇ ရာစုတွင်အဲဟ်လေစွန်နသ်အကြား မဇ်ဟဘ် လေးခုသည်အခြေခိုင်အတည်ဖြစ်လာခဲ့သည်။   အခြားမဇ်ဟဘ် များ၏နောက်လိုက်ဖြစ်ခြင်းကို ဟရာမ် ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။  အိဗ်နေဆလာဟ်  သည်မဇ်ဟဘ် လေးခုမှလွဲပြီး အခြားမဇ်ဟဘ် များ၏နောက် လိုက်ခြင်းကို ဟရာမ် ဟု တားမြစ်ဖှသဝါ ထုတ်ခဲ့သည်။
၄-အိဂျ်သေဟာဒ် နှင့် သပ်က်လီးဒ်တစ်ဖန်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာသည့်ကာလ: တစ်ချိန်က အဲဟ်လေစွန်နသ် ပညာရှင်အချို့ ဥပမာ-အဘွလ်ဖှသ်ဟ်ရှဲဟ်ရစ်္စသာနီ (၅၄၈ ကွယ်လွန်)၊ အဘူအစ္စဟာ က်ရှာသွဗီ(၇၉၀ ကွယ်လွန် )တို့သည် အိဂျ်သေဟာဒ် နှင့်စပ်လျင်း၍ ပိတ်ဆို့နေခဲ့သည်များကို စောဒကတက်ခဲ့သူများ အိဂျ်သေဟာဒ် ကိုလိုလားသူများဖြစ်ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်အတွင်း အချိ့သောအဲဟ်လေစွန်နသ် ပညာရှင်များနှင့်  ရှိခ်ခွလ်အဇ်ဟဲရ်    တို့သည်  အစ္စလာမ့်ခေတ်ဦးကာလတွင်  ဆွဟာဘာ  အသီးသီးအားသပ်က်လီးဒ်  လုပ်ခြင်းသည် ဂျာယိဇ် ဖြစ်ခြင်း၊မဇ်ဟဘ် လေးခုတွင် အိဂျ်သေဟာဒ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကန့်သတ်မှုများရှိနေခဲ့ခြင်း  စသည်တို့ကို မွတ်စလင်မ် များကလည်း တူညီစွာ အထောက်အထားပေးလာသည့်အပေါ် ငြင်းပယ်ခဲ့ကြပြီး အိဂျ်သေဟာဒ်ဒေအိလ်မီးသည် တစ်ဖန်ပြန်လည် အသက်ဝင်လာခဲ့သည်။ သို့ပါ၍စွန်နီမဇ်ဟဘ်ဝင် မိုကလ်လိဖှ် များသည်မိမိတို့နှစ်သက်ရာ မဇ်ဟဘ် ၏အေမာမ်ကြီးများထံ သပ်က်လီးဒ် လုပ်နိုင်သည်။ မည်မျှအထိဆိုလျှင် မဇ်ဟဘ် ၄ ခုအကြားအလွယ်ကူဆုံး
ဖှသဝါ ပေးထားသည့် မပ်္စအလာ အသီးသီးကိုရွေးချယ် သပ်က်လီးဒ် လုပ်ခြင်းသည်ပင် ဂျာယိဇ် ဖြစ်သည်။ ဤအမြင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အဲဟ်လေစွန်နသ် ၏ယခင် ဖှစ်ကာပညာရှင်များအကြား၌ အကျိုးထူးများလည်းရှိခဲ့သည်။ မည်မျှပင် ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အချို့ကငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည် ဖြစ်စေ ဥပမာ - ကီယာဟရာစီး နှင့် အိဗ်နေသိုင်မီယာ တို့သည်ထိုအချက်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။
သပ်က်လီးဒ် ဂျာယိဇ် (သို့) ဟရာမ် ဖြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အဲဟ်လေစွန်နသ် တို့၏အမြင်[ပြင်ဆင်ရန်]
သပ်က်လီးဒ် သည် ဂျာယိဇ် (သို့) ဟရာမ် ဖြစ်သည်ဆိုသည့်အမြင်နှစ်မျိုး အဲဟ်လေစွန်နသ် အကြားရှိသည်။ အချို့ယခင် ဖှစ်ကာပညာရှင်များသည် သပ်က်လီးဒ် ကိုဟရာမ်ဟုဆိုကြသည်။ မဇ်ဟဘ် ၏အေမာမ်ကြီးလေးဦးဖြစ်သော (အ ဘူဟနီဖှာ ၊ မာလိက်ဘင်န်အနပ်္စ၊ ရှာဖှအီ ၊ အဟ်မဒ်ဘင်န်ဟန်ဘလ် ) တို့ထံမှလည်း သပ်က်လီးဒ် လုပ်ခြင်း ဂျာယိဇ် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားချက်များကို ဆင့်ပြန်ထားကြသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်းယခင်က ဖှစ်ကာ ပညာရှင်များပင် ဖြစ်သော ဖှစ်ကာပညာရှင်ကြီး ဟနဖှီ၊ မိုဟမ္မဒ်ဒိဗ်နေဟစန်ရှိုင်ဘာနီ တို့ထံမှလည်း သပ်က်လီးဒ် သည် ဂျာယိဇ် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်တို့ကို ဆင့်ပြန်ထား၏။ ရှာဖှေအီ ကလည်းမိမိ၏ အထောက်အထားအမြင်တို့သည် ဆွဟာဘာ သို့မဟုတ် သာဗေအီ တစ်ဦး၏ လမ်းစဉ်အတိုင်း ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ထားသည်။ ထို့အပြင် ရှာဖှေအီ ၏စာအုပ်တွင် ဖှစ်ကာပညာရှင်များဖြစ်သော ဥပမာ- အိဗ်နေစဲရ်ရာဂျ် ၊ အဟ်မဒ်ဒိဗ်နေဟန်ဘလ် ၊ စိုဖှီယားန်စူရီ တို့ထံမှလည်း အာ လင်မ် တစ်ဦးသည်နောက်အာလင်မ်တစ်ဦးထံမှ သပ်က်လီးဒ် လုပ်နိုင်ကြောင်းတို့ကိုဆင့်ပြန်ထားကြသည်။ အိဗ်နေကိုင်ယူးမ်ဂျောင်ဇီယာ သည်ထိုဒွိဟကွဲပြားမှုတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုသို့ဖြေရှင်းချက်ပေးထားသည် ‘အာလင်မ် အတွက် အခြားတစ်ယောက်ထံ သပ်က်လီးဒ် လုပ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသော အနေအထားတွင်သာ ဂျာယိဇ် ဖြစ်ပြီး ကျန်အနေအထားတွင် ဂျာယိဇ် မဟုတ်ပါ။ အိဗ်နေဟဇ်မ် ကတစ်ဖန် သပ်က်လီးဒ်ကို ဘာသိလ်ဟုဆိုပြန်ကာမိမိ၏နောက်လိုက် များနှင့် အခြားမဇ်ဟဘ် များကိုအိဂျ်သေဟာဒ် လုပ်ရန်သာဖိတ်ခေါ်၏။
အဲဟ်လေစွန်နသ် ၏နောက်ပိုင်း ဖှစ်ကာ ပညာရှင်များက သပ်က်လီးဒ် သည် ဂျာယိဇ် နှင့် ဝါဂျိဘ် ဖြစ်ကြောင်းကိုအာလင်မ် မဟုတ်သူများအတွက်လက်ခံကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူတိုင်း အဲဟ်ကာမေရှဲရ်အီး မှပြဋ္ဌာန်း ထားသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်ရှိသည် မိမိသည်မ ည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်ရမည်ကို မသိရှိခြင်းသည် ရှရ်အီးမှဝေးကွာနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
↑ نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام။7March 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ترکیب مطالب این مقاله (تقسیم تقلید به پسندیده و ناپسند و بیان آیات آن) عمدتاً بر اساس دو کتاب زیر
↑ شب خیز، محمدرضا، اصول فقه دانشگاهی، نشر لقاء، قم - ایران، اول، 1392 ه‍ ش.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သပ်က်လီးဒ်&oldid=719655" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။